Xiaomi Mi4i अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा २238 डलर को लागी उपलब्ध छ Androidsis
यस बिन्दुमा, शिओमीको बारेमा धेरै कुरा गर्न आवश्यक छैन किनकि हामी सबैलाई चीनमा आधारित यस निर्मातालाई थाहा छ। यस वर्ष अहिलेसम्म शाओमी चीनियाँ निर्माता बन्यो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मा धेरै उत्पादनहरू बिक्री गर्दछ। यसको राम्रो गुणको साथ यसको गुणस्तरले धेरै उपभोक्ताहरूलाई यस »Apple China China को टर्मिनल र उपकरणहरूमा शर्त लगाउँदछ।
हामी कम्पनीलाई यसको अर्को प्रमुख शाओमी एमआई5अनावरण गर्न पर्खिरहेका छौं। टर्मिनल जुन भर्खरको अफवाहको अनुसार प्लस संस्करणको साथ आउँदछ। जबकि त्यो आउँदैन, हामीले उनीहरू द्वारा निर्मित अन्य उपकरणहरूको समाचारका लागि एशियन बजारमा लॉन्च गर्नुपर्‍यो र जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध छन्, नयाँ शाओमी एम4आईको मामलामा।
यो उपकरण भारतमा अप्रिलमा घोषित गरीएको थियो, र यसको सीमित उपलब्धता थियो तर यसको बाबजुद कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा टर्मिनल सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। यो नयाँ स्मार्टफोन थोरै समयको प्रसिद्ध GearBest अनलाइन स्टोरमा देखा पर्‍यो र अब पुष्टि गर्दछ कि स्मार्टफोन विश्वको कुनै पनि ठाउँमा पठाउन सकिन्छ। को Xiaomi Mi4i, को मूल्य मात्र just २237 छ, भारत मा यसको हालको मूल्य भन्दा अलि महँगो, को बारे माa200 एक परिवर्तन, तर जे भए पनि एक महान मूल्य।
एक ठूलो मूल्य टर्मिनल महान विशिष्टता छ भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद छ। Xiaomi Mi4i को एक छ १.5..XNUMX इन्च स्क्रीन र फुलएचडी रेजोल्यूसन (१ 1920 ०० x p 1080० पिक्सेल) सँग शार्पले निर्मित गर्दछ जसमा कर्निंग3गोरिल्ला ग्लास सुरक्षा पनि छ। भित्र हामी प्रोसेसर पाउँछौं। Snapdragon 615 आठ-कोर क्वालकॉम द्वारा निर्मित, यस प्रोसेसरको छेउमा त्यहाँ ग्राफिक्सको लागि एक एड्रेनो 405०XNUMX GPU छ र GB जीबी र्याम मेमोरी। यसको फोटोग्राफिक सेक्सनको सन्दर्भमा, हामी देख्छौं कि कसरी टर्मिनल ए समावेश गर्दछ १ Me मेगापिक्सेल क्यामेरा पछाडि डबल एलईडी फ्ल्यास र फ्रन्ट क्यामेराको लागि MP सांसद एक। अन्य कुनै कम महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये हामी देख्न सक्छौं कि चिनियाँ उपकरणले ड्यूल-सिम, G जी / एलटीई जडान प्रदान गर्दछ र एन्ड्रोइड .5.० ललीपप अन्तर्गत शाओमीको MIUI I अनुकूलन तहको साथ चल्दछ।
Xiaomi Mi4i एक धेरै किफायती मूल्यमा छ अन्य टर्मिनलहरूको तुलनामा उस्तै सुविधाहरूको साथ, लगभग २१० युरो बदल्न। एक टर्मिनल जुन हामी हाम्रो हातमा आशा राख्छौं कि हाम्रो YouTube च्यानलमा अधिक विस्तृत समीक्षा गर्न सक्षम हुन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Xiaomi » शाओमी मी i आई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा २4 डलरमा उपलब्ध छ
मेरो राय र हजारौं प्रयोगकर्ताहरूको विचारमा, यो टर्मिनल अपेक्षाहरूमा बाँच्दैन। Overheating समस्याहरु को अतिरिक्त। थोरै बढीको लागि म अत्यधिक Mi4W सिफारिश गर्दछु, मसँग यो लगभग एक बर्ष भैरहेको छ र यो मेरो होन्डा सिविक जस्तै काम गर्दछ। PERFECT !! हाहाहा
कुन स्टोरमा यो अवस्थित छ, र जसो हिसाबले मैले geekvida र हँसिया खरीदको धेरै नकारात्मक विचारहरु पढेको छु, कुन स्टोर तपाई मलाई xiaomi मोबाइल किन्न सिफारिस गर्नुहुन्छ?
साईकोन्जलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई गेर्बस्ट र गीकबुइ like मन पर्छ, यद्यपि मैले यो फोन अघि meizu m2 नोट समातें र यसको शीर्षमा यसको लागत तपाईंको ज्यादै कम हुनेछ।
Pantench लाई जवाफ दिनुहोस्
[APK] WhatsApp अब तपाईंलाई मुख्य स्क्रीनबाट आफ्नो कुराकानी खोजी गर्न अनुमति दिन्छ